Sideed u abuuri kartaa boorso hurdo oo ku habboon heerka cabirka heerkulka cayiman?
Markaad haysatid hindisada ama RFQ boorsada jiifka, laakiin macaamiishaadu aysan lahayn wax qeexitaan ah, waxay kaliya ku siin karaan shuruudo ku saabsan heerka heerkulka bacaha loo isticmaali doono ama ujeedada loo adeegsan doono. Sidee loo abuuri karaa boorso ku habboon ujeeddada?
Maxay noqon doonaan dhinacyada ugu waaweyn ee heerka heerkulka?
Waxaa ka mid ah qaabka hooyada, qaab baqshad iyo baqshad leh guntin. Qaabka Hooyo waa wanaagsan tahay si loo gaaro heerkul hoose, qaab dhismeedka baqshaddu waa mid qol leh oo raaxo leh, laakiin ay adag tahay in la gaaro heerkul aad u hooseeya. Baqshadda hoodhku waa sida ugu ballaadhan oo raaxo leh sida baqshad, oo ka wanaagsan baqshad si loo gaadho heerkulka hoose, laakiin uma fiicna sida hooyada inay u gaarto heerkulka hooseeya.
Waxaan halkan ku tilmaameynaa dhismaha dahaarka iyo dhismayaasha kale.
· Si fudud 1 lakab Dhismahaan waxaa badanaa loo isticmaalaa bac xagaaga ama 3 bac oo xilli hurdo ah.
· Laba lakab oo dhisme ah, oo sida ugu badan loo adeegsado abuurista shandad hurdo oo ku habboon adeegsiga cimilada qabow. Marka loo eego khibradeena, si fiican ayey u shaqeysaa. Dad badan oo bacda milatariga hurda oo wata
Laba lakab oo dhisme ah.
Saddex lakab ama kabadan, si aan u gaarno heerkul aad u hooseeya, waxaan sameyn karnaa ugu badnaan 4 lakab oo hurdo ah illaa iyo hadda.
Xirmooyinka diirimaadka ah waxaa sida caadiga ah lagu xardhay qaybta sare ee bacda hurdada si hawada kulul looga dhex xiro bacda dhexdeeda.
Waxay badanaa u adeegsan jirtay bacda hurdada hooyaday iyo bacda hurdada leh xiiran.
Nalalka dabayshu sida caadiga ah waxay iskaashanayaan zipper-ka si looga hortago cimilada qabow inay gasho boorso iyada oo loo maro ilig wacaha.
· U soo jiido xarig si aad u xirto furitaanka sida ugu yar uguna macquulsan.
No Ha ku quusin qolofka si looga hortago in dabayshu u soo baxdo cirbadaha.
· H 'labo labo qol' si looga hortago in dabayshu ka soo baxdo cirbadaha irbadaha. Fadlan tixraac FAQyada. https://www.greencampabc.com/faqs/
Qalabkee loogu isticmaali doonaa bacda jiifka ayaa leh dadaal ballaaran oo ku saabsan heerka heerkulka. Waxaa ka mid ah dahaarista & qolofka iyo dahaarka.
Guud ahaan, waxaa jira laba nooc oo shay ah oo loo isticmaalo xayiraad bacaha hurdada. Mid waa fiber aan dabiici ahayn, mid kalena hoos ayey u dhacday. Hoos u dhaca wuxuu gaari karaa heer ka hooseeya fiber artifishal ah oo ku saleysan isla mugga. Fiber-macmal kala duwan ayaa sidoo kale leh waxqabadyo kala duwan.
Dharka qolofka leh iyo dharka daboola
Bacda xagaaga badanaa waxay isticmaalaan dhar jilicsan oo fudud iyo bacda qaboobaha cimilada qabow badanaa waxay leeyihiin dhar jilicsan oo raaxo leh, taas oo sidoo kale ku habboon in la diiriyo.
Ma jiraa halbeeg caalami ah oo qeexaya heerkulka heerkulka bacda hurdada?
Waxaa jira laba heerar caalami ah, EN ISO13537 & EN ISO23537. EN ISO13537 ayaa la abuuray marka hore, EN ISO 23537 waa nooca wanaajiyay. EN ISO13537 & EN ISO23537 aad ayey iskumidyihiin guud ahaan labadan heerarna waa ansax yihiin. EN ISO23537 waxay leedahay faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan jawiga imtixaanka oo keliya. Nooca ugu dambeeyay ee labada istaandar waa ISO13537-2012 & ISO23537-2016. Labadan heerar, waxaan ku qeexi karnaa kuleylka si aan caadi aheyn. Waa maxay sababta ay sida saxda ah u ahayn wax sax ah, sababtoo ah qof ka duwan ayaa leh dareen kala duwan. Iyo si loo qeexo heerka caalamiga ah, waxaa jira dhinacyo aan macquul aheyn, sida habka tijaabada, baqshada iyo hooyada waa kala duwan tahay.